Manni Murtii Obbo Jawaar Mohaammad fa’i gara mana amala sirreessaatti akka dabarfaman ajaje | Jawar Mohammed
BBC Afaan Oromoo by Maheder Haileselassie Tadese
Manni murtii Olaanaa Federaalaa himata namoota galmee Obbo Jawaar mohaammad fa’a jalatti himataman dubbisuuf Fulbaana 21 tti beellama dabarse.
Guyyaa har’aa manni murtii himannaa himatamtootarratti dhihaate dubbisuu beellamee ture. Haata’u malee, gaaffii abukaatota himatamtootaa bu’uura godhachuun yeroo biraatti darbe.
Gama kaaniin, manni murtii ammaan achi Obbo Jawaar Mohaammad dabalatee himatamoonni 18 dhimma isaanii mana amala sirreessaatii akka hordofan ajajeera.
Kana dura, Obbo Jawaar fa’i waajjira qorannoo yakkaa Poolisii Federaalaa magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo turan.
Dhaddacha har’aa irratti himatamtoota galmee Obbo Jawaar Mohaammad jala jiraniifi biyya keessatti argaman keessaa Obbo Dajanee Xaafaa fi Obbo Mastawaarid yeroo lammataaf hin argamne.
Himatamtoota biyya alaa jiran kan ilaaleenis poolisii himatamtoota kana dhiheessuudhaaf beellamni qabame gabaabaa waan ta’eef raawwachuu hin dandeenye jedhan Abbootiin Alangaa.
Abukaatoonni gama isaaniitiin namootni kunneen biyya alaa akka jiran osoo beekamuu fi himatnis bakka isaan hin jirretti akka baname osoo beekamu akka poolisiin qabee dhiheessuutti ittiin beellama dheeressuun sirrii miti jechuun mormaniiru.
Dhimma obbo Dajanee Xaafaa fi Mastawaarid kan ilaaleenis himatamtootni lamaan galmee biraa irrattis himatamani waan jiraniif beellama har’aa irratti dhihaachuu hin dandeenye jedhe abbaan alangaa.
Kanaafis fuuladuratti galmee biraa irratti himataman adda kutuun dhadhacha kanarratti akka dhihaataniif abbaan seeraa yaada dhiheesseera.
Gama biraatiin, Obbo Dajanee Xaafaa maatii isaaniitiin daawwatamaa akka hin jirree fi wantoota barbaachisoo taasifamaa hin jiran jechun abukaatonni kaasaniiru.
Dhadhacha har’aa irratti kan dubbate Shamsaddiin Xahaa, dhukkubsatee mana yaalaatti deddeebi’aa akka jiruu fi guyyaa beellama mana yaalaa qabutti akka yaalamu dhorkameen dhukkubni natti hammaachaa jira jechuun iyyateera.
Dhadhachi har’a himata dhagahuuf beellamame kunis sababa Dajanee xaafaa fi Mastawaarid hin argamneef himatni hin dubbifaminiifi haa dubbifamuu irratti abbootii alangaa fi abukaatota gidduu mormii dheeraan ta’eera.
Abukaatonni “Dajanee fi Mastawaarid wanta hin dhihaanneef himatni isaanii bakka tokkotti dhagahamuu qaba, nutis mormii qabnu bakka tokkotti wanta dhiheessinuuf beellama biraatti nuuf haa darbu jechuun gaafataniiru.
Gama biraatiin himatamtoonni galmee kana jala jiranii fi buufata poolisii 3ffaatti hidhamanii jiran argannee mariisisuu hin dandeenye jechuun abukaatonni komii dhageessisaniiru.
Abbaan alangaa himatamtoonni erga himanni harka gahee asitti bakka amma tursiifamanii jiranirraa gara mana sirreessaatti bakka walfakkaataatti hidhamuu qabu jechuun gaafateera.
Abukaatoni gama isaaniitiin himatamtoonni lakkoofsa 1-3 jiran namoota siyaasa keessatti gahee guddaa qaban waan ta’eef nageenya isaanitiif jecha bakka amma tursiifamanii jiranirraa jijjiiramuu hin qaban jechuun mormaniiru.
Dhimma kanarratti kan dubbate obbo Jawaar mohaammad” bakka feetanitti nuhidhaa nuti isaaf dhimma hin qabnu” jechuun dubbate.
Manni murtii mormii gama lamaanii ilaaluun ajaja kenneera.
Haaluma kanaan bakka tursiifama himatamtootaa kan ilaaleen himatamtoonni hundi ammaan booda gara mana sirreessaatti akka darban ajajeera.
Torban dura manni murtii Obbo Iskindir Naggaa kan shororkessummaan himataman dhimma isaanii mana amala sirreessaa Qaallittiidhaa akka hordofan murtessuun ni yaadatama.
Dhimma himatamtoota biyya alaa jiranii irrattis poolisiin federaalaa beellama itti aanurratti dhihaatee waan irra gahe akka ibsu ajaje.
Dhimma yaala dhuunfaa shamsaddiin Xahaa irrattis himatamaan kuni yeroo barbaachise hundatti yaala akka argatu haalli mijachuufi qaba jedheera.
Shakkamtoonni har’a dhadhacha irratti hin dhihaanne Obbo Dajanee Xaafaa fi Mastawaarid dhihaachuun himatni Fulbaana 21 akka dhagahamuuf manni murtichaa beellameera.
Previous articleJawar Mohammed’s Statement in Federal High Court 9/21/20
Next articleEthiopia’s PM Abiy Ahmed loses his shine